"हजुरबाले हिर्काएको तमाखुको नलीले कृष्णभक्त भनेर चिनायो !" | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७६ मंसिर १९ गते ०४:४७
सन्तोष दहाल, ललितपुर । सानैदेखि नाच्न भनेपछि त हुरुक्कै हुने, तर अरुको अगाडि देखाएर होइन, एक्लै अनि लुकीलुकी ! अरुले देखे भने त लाजले भुतुक्कै भईन्थ्यो । त्यही रहरै रहरमा गरेको जानी नजानीको नृत्यबाट सुरु गरेको यात्रा आज कर अनि बाध्यता सम्म आईपुगेको छ, अनि सबैले उनलाई कलाकार, अभिनेता, रङ्गकर्मी आदि उपनामले सर्वत्र चिन्छन ।
उनको परिचय एक होइन अनेक छन्, केही समयअघि निस्किएको चर्चित नेपाली कथानक चलचित्र पशुपति प्रसाद का सुनबुढा हुन् उनी, अनि लुकामारी फ्लिमको घरबेटी बा हुन् । यस्तै टेलिसिरियल डिठ्ठा साप का किसन्चा पनि उनै हुन् । यस्ता नाम त कति हुन् कति । तर ती सबै रिल लईफका नाम मात्र ! रियल लाईफ़मा त उनी कृष्णभक्त महर्जन हुन् , अनि उनको परिचय भने नृत्य निर्देशक , रंगकर्मी, अभिनेता । अझ प्रमुख परिचय त अर्कै छ , उनको बौद्धिकतालाई उच्च मुल्याङ्कन गर्दै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उपाधि दिएको प्राज्ञिक व्यक्तित्त्व( प्राज्ञ) हुन् उनी ।
उतिबेला कतै नाचेको देख्यो भने नाचेर खानेका सन्तान , गाएको देख्यो भने गाईनेका सन्तान भनेर हिक्ने गर्दथे समाजमा ।अझ कतिले त भन्थे, "हामीलाई यहाँ कति दुख गरेर त खान पुग्या छैन, तैँले नाचेर क्यार्छस ?" अनि घरकाले भन्थे, "यत्रो काम गरेर सक्नु छ , तँ गाएर, नाचेर डुलेर हिँड्ने?" तर काम र कार्यक्षेत्र जुनसुकै होस्, अथक मेहनत र साधनाबाट जे गरे तापनि नाम,दाम सबै कमाउन सकिने रहेछ भन्ने उनको अहिलेको हैसियत र सफलताबाट पुष्टि भएको छ ।
कृष्णभक्त महर्जन, ललितपुरको ठेचोमा नेवार समुदायको परिवारमा जन्मिए । परिवारको जेठो छोरा रहेका उनी १४ वर्षको हुँदा बुबाको निधन भयो । सानोमा घरमा सबैले 'बाबु' भन्ने गरेको उनलाई सम्झना छ । आमा, हजुरबाको माया, हेरचाह र छत्रछायाँमा हुर्किए । स्कुल त जान्थे, तर पाठ्यक्रमको गहन अध्ययन भन्दा पनि नाच्न , गाउन र अभिनय गर्न तिर बढ्ता लगाव जाने । तर पारा उही, अरुलाई देखाएर भनेर होइन,लुकीलुकी मात्र !
ज्ञान कुमार सुनुवार नाम गरेका एकजना अत्यन्त मिल्ने साथी थिए । कृष्णभक्तलाई नाच्ने गाउने र अभिनय गर्ने सोख छ भन्ने कुरा उनी एकजनालाई चाहिँ थाहा थियो । उसबेला कृष्णभक्त लगनखेलको एउटा पेट्रोल पम्पमा काम गर्थे । बैंकमा गएर पेट्रोल डिजेल ल्याएर बचेको फुर्सदको समयमा लुकीलुकी नाचेर सिक्ने गर्थे । तर अरु कसैलाई भनेकै थिएन, थाहै थिएन । यो थाहा पाएर अति भएपछी ज्ञान कुमारले भने , 'यसरी हुँदैन, आफ्नो प्रतिभा त अरुलाई देखाउनु पो पर्छ त ! हिँड म लिएर जान्छु ।'
२०४३ सालतिर उनले पहिलोपल्ट आफ्नो प्रतिभा अरुका सामु देखाउने मौका पाए ,राष्ट्रिय नाचघर जमलमै । उसबेला नाचघरमा जस्ताको छानो थियो । त्यहाँको हलमा उनले पाण्डव सुनुवारको गीत 'भिज्यो तिम्रो रातो पछ्यौरी नि हाई हाई ' र 'धानको बाला इलरी बिलरी , बिना पोते सुहाउदैन तिलरी' भन्ने गीतमा अभिनय गरे । हलभित्र लाईटमा नाचिरहेका उनले यसो अगाडी हेर्दा त दर्शकका टाउका नै टाउका देखे । अलिअलि २/ ४ जना मात्र होलान भन्ने सोचेको त त्यत्रो हल पुरै दर्शकले भरिएको रहेछ । अब मर्नु भैगयो लाजले ! स्टेज नै छोडेर सुइकुच्चा ठोके कृष्णभक्तले ! तर भागेर के सुख पाईन्थ्यो र ! साथीले गएर कठालोमा समातेर फेरी उभ्यायो स्टेजमै ! सकीनसकी अरु गीतमा पनि नृत्य गरे । यसरी उनको कलाकारिता यात्राले यहीँबाट निरन्तरता पाउँदै गयो ।
उनले संघर्ष त धेरै नै गरेका छन् हालसम्मको सफलता प्राप्त गर्ने दौरानमा । तर केही रमाईला किस्सा पनि छन् । उनी भारत नाट्यमा क्लासिकल डान्स पनि गर्थे । प्राक्टिस गर्ने क्रममा एकदिन घरमै कोठाभित्र चुकुल लगाएर नाच्न थाले । पुरानो स्टाईलको घर थियो , दलिन राखेर तलो छापेको । नाच्ने क्रममा जम्प गरेर थुचुक्क बस्ने भएको , दलिन भाँचिएर मान्छेको खुट्टा त छिंडीको तल्लामा ! छिंडीको तल्लामा बसेर हजुरबा तमाखु तान्दै रहेछन । 'लौ न के भाँच्चियो , भुकम्प आयो कि क्या हो' भनेर हजुरबाको सातोपुत्लो उड्यो र चिच्याउन थाले । तर हेर्दा उनकै सामु नातिको खुट्टो दलिन भाँच्चिएको चेपडमा झुण्डिराखेको थियो ! अब रिसको पारो तात्यो हजुरबाको ! माथि आए, नाति त दलिन भाँचिएको ठाउँमा खुट्टा अड्काएर बसिराख्या ! डुक्रिए हजुरबा-' तँलाई भाते ! हामी यहाँ काम गरेर त खान सक्या छैनौँ, तँ चाहि दलिन नै भाँच्चिने गरी नाच्ने ? कराउँदै थिए, हातमा रहेको तमाखुको नालीले दनक दिए पछाडीबाट ! एकातिर खुट्टो अड्किएर दुखेर मर्नु भैरको छ अर्कोतिर नलीको बज्र पिठ्यूँमा बज्रिदा उनले तोरीको फुल देखे । तर त्यही कुटाई कृष्णभक्तको भविष्यको लागि वरदान सावित भयो । उनी भन्छन,'हजुरबाले उतिबेला यसरी नकुट्या भए म आज यसरी कृष्णभक्त भनेर पक्कै चिनिने थिइनं होला । हजुरबाले पनि मेरो पछिको सफलता देख्न पाउनुभयो ।'
कृष्णभक्त महर्जनको जीवनमा अर्को एउटा गम्भीर दुर्घटना पनि झन्डै भईसकेको थियो , जुन घटना घटेको भए उनको पुर्ख्यौली घरखेत बेचेर पनि तिर्न पुग्ने थिएन । २०४५ सालतिर पेट्रोल पम्पमै काम गर्दा पेट्रोल लिनलाई एयरपोर्ट जानुपर्थ्यो । डान्सको ट्रेनिंग पनि चलिरहेको थियो र त्यसको परीक्षा पनि आउने लागेको थियो । ४००० लिटर पेट्रोलको लागि लागि उतिबेला साढे ३ लाख लाग्थ्यो । लगनखेलबाट पैसा लिएर बबरमहलको बैंकमा राख्न जानुपर्ने । एक दिन त्यसैगरी जाने क्रममा काठमाडौँमा राजीव गान्धीको सवारी भएको थियो, बाटो जाम थियो । कुपन्डोलमा पुग्दा भोक लाग्यो , होटल भित्र पसेर चिया, जेरी स्वारी खाए । त्यतिबेला नै खुर्सानीको धुलो , काठको धुलो आदि आँखामा छरेर झोला र पैसा लुट्ने विकृति भर्खर भर्खर काठमाडौँमा आएको थियो । त्यही डर पनि उनलाई थियो , त्यसैले मोबिल लागेको थोत्रो पत्रिकाको कागजमा साढे ३ लाख पैसा गुटुमुटु पारेर थाहा नपाउने जस्तो गरेर उनी गएका थिए । खाजा खाए,पैसा तिरे । बैंकमा राख्न लिएर गएको पैसा होटलमै बिर्सेर आफ्नो बाटो लागे । बाटो मा जाँदा के बिर्सेके बिर्से जस्तो त लाग्या थ्यो, ख्याल भएन । बैंकमा पुगेर पैसा हेर्दा पैसाको पोको नै छैन । सातोपुत्लो , होस् हवास उड्यो । दौडेर बबरमहल देखि कुपन्डोल सम्म आउँदा होटेलवाला टेबल पुछ्दै थियो । उसले त्यतिबेलासम्म त्यो पोको भेट्टाएको रहेनछ, पुरै पैसा सकुशल पाईयो । ढुक्कले लामो सास फेरे । थोत्रो कागज भित्र राखेको भएर होटेल वालाले त्यसलाई वास्ता गरेन । यो मेरो पैसा भनेर देखाउदा त होटेलवाला नै झन्डै बेहोस भएको !
दर्पण दैनिक संगको छोटो भेटमा महर्जनले यस्ता केही जीन्दगीका दुख सुखका किस्साहरु शेयर गरेका छन् । जुन कतिपय रमाईला छन् भने कतिपय दुखद । पहिलेपहिले केटी मान्छेहरु नृत्य तथा कलाकारिता क्षेत्रमा प्राय आउदैनथे । सामाजिक मूल्य मान्यता , संस्कार आदिका कारण छोरी मान्छेहरुलाई सबै क्षेत्रमा घुलमिल हुन वर्जित थियो । त्यसताका केटीको भूमिका पनि केटाले नै निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । विभिन्न ठाउँमा कृष्णभक्तले पनि त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा यसले केटीहरुलाई बिगार्ने भो भनेर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप पनि आए। तर नबिराउनु नडराउनु भनेझैं कतिसम्म सहनु पर्छ सहुँला भनेर कुनै पर्वाह नगरी उनी अगाडी बढ्दै गए । तर अहिले जमाना ठ्याक्कै उल्टो भयो । अहिले यस क्षेत्रमा केटी मान्छेहरु अत्याधिक छन् , तर केटी मान्छेहरु चाहिँ कम भएकोले गर्दा केटी नै केटा बनेर अभिनय गर्नुपर्ने अवस्था आएको कृष्णभक्त बताउछन । यस्ता कैयौं अनुभव भोगेका उनी आफ्नो जीवनबारे भन्छन , ' साधना पनि हुनु पर्यो, संघर्ष पनि गर्नु पर्यो र गरियो , नराम्रो भन्नेहरुको मुख पनि असल काम गरेर देखाएरै टालियो ! तर मा कुन बाटोमा लागेको छु , असल कि खराब भन्ने कुरा छुट्याउन र पहिचान गर्नसक्ने खुबी चाहिँ आफुमा हुन सक्नु पर्दो रहेछ । तर यो कलाले मलाई संस्कार चाहिँ अति नै सिकाएको छ , मान ,प्रतिष्ठा , इज्जत सबै दिएको छ । मैले यो पेसामा लागेर्पैसा कमाउन त सकिन, तर मरेपछिको लागि मलामी चाहिं धेरै कमाएको छु । '
अहिलेको यो अवस्थासम्म आईपुग्नको लागि प्रेरणाको स्रोतको रुपमा पहिलो श्रेय चाहिं कृष्णभक्तले आफ्नै जीवन साथीलाई दिए । 'धर्मपत्नी राममाया महर्जनको साथ र सपोर्ट आजसम्मको हरेक पालामा भएको थिएन भने कृष्णभक्त आज यो हैसियतको हुने थिएन । यो क्षेत्रमा आउने सक्दैन थिएन होला ।' उनले थपे - 'पारिवारिक साथ र सपोर्ट नहुँदा कतिपयको घरबार बिग्रेको पनि देखेको छु , कतिपयले घर बिगार्न अनेकथरी आरोप लगाएर पनि सम्बन्धलाई बिगार्न खोज्छन, तर हाम्रो सम्बन्ध हालसम्म विश्वासमै अडिएको छ ।'
महर्जनको जीवनको एउटा नमीठो र अर्को दुखलाग्दो कुरो भने अध्ययन अगाडी बढाउन नसक्नु रहेछ । कला क्षेत्रमै लागेको कारण उनले आई ए पनि पास गर्न सकेनन् । तर संगीतमा भने उनले मास्टर पास गरेका छन् ।
लगभग ३६ वर्ष जतिको कला यात्रामा उनले २ दर्जन भन्दा बढी ठुला चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् भने थुप्रै टेलिसिरियलमा पनि कृष्णभक्त महर्जनलाई देख्न सकिन्छ । त्यस्तै नाटक त कति हुन् कति । यस्तै उनले म्युजिक भिडियोहरुको निर्देशन तथा त्यसमा अभिनय समेत गर्दै आएका छन् । उनलाई सबैभन्दा धेरै दुख त्यतिबेला लाग्छ , जतिबेला आफ्नो फ्लिम तथा अभिनय गरेका नाटकहरु हेन जाउँ न भन्दा साथीहरुले भन्छन, 'हाम्रो पैसा रसमय खर्च गरेर तिम्रो चलचित्र हेर्न गईदिनुपर्ने ? हाम्रो काम चाहि तिमीले गरिदिन्छौ ?'
सरकारको नजरमा पर्न सकेन् पुष्प व्यवसाय - कुमार कसजु श्रेष्ठ
२०७७ असार १४ गते ०९:५०
फूल भन्ने वित्तिकै सबैको मन फुरुङग हुन्छ । फूलले सबैलाई आनन्द दिन्छ । आझ भनौं नेपालको परिवेशमा त मानिस जन्मे देखि मृत्युपर्यन्तसम्म जुनकुनै कार्यका लागी पनि फूलको आवश्यकता पर्छ । फूलले दिने सुगन्धदेखि सुसजावटमा मानिसहरु लोभिएका हुन्छन । तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीको कारण सबै क्षेत्र प्रायः ठप्प छन । पुष्प व्यवसाय पनि यो महामारीबाट टाढा रहन सकेको छैन । कस्तो छ त पुष्प व्यवसायको अवस्था, समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरु लगायतका विषयमा रहेर फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठसँग दर्पण दैनिकका लागि केशर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीः
यी आठ कारणले सिमानामा काँडेतार अनिर्वाय : नवल खडका
२०७७ असार ८ गते ०८:४०
केशर विश्वकर्मा, काठमाडौं । हाम्रो देशको सिमा मिचिदैँ गएपछि चलचित्रकर्मी तथा चलचित्र निर्देशक नवल खड्काले सिमानामा काँडेतार अभियान चलाउँदै आएका छन् । विगत एक दशक देखि नै अभिनेता तथा चलचित्र निर्माता खड्काले फिल्म निर्माणको क्रममा विभिन्न सिमानामा पुग्दा त्यहाँको दृश्यले आफूलाई प्रभाव परेको भन्दै यो अभियानको सुरुवात गरेका थिए । दर्पण दैनिकसँग कुराकानी गर्दै खडरकाले भने, 'विश्वको ४० देशले विभिन्न कारण आफ्ना देशको सिमानामा पर्खाल तथा काँडेतार लगाएका छन, हामी चाँहि किन चुप लाग्ने ? यसको अवधारण धेरै अगाडी आएपनि पछिल्लो समय चर्चा पाएका छ ।'